WinToFlash [बुटेबल USB सृष्टिकर्ता] सुविधाहरू अवलोकन
छिटो, सजिलो र ठिक छ ।
सबै भन्दा राम्रो Bootable USB समाधान तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन्
त्यहाँ आउन सक्छ कि एक दिन ओप्टिकल ड्राइव रूपमा छन् पाउन कठिन रूपमा 5.25 फ्लपी ड्राइव हो आज । नयाँ USB युग आउँदै छ!
WinToFlash गर्न संभावना छ, एक ठूलो फरक बनाउन गर्न, तपाईं काम बाटो छ । यो बनाउन हुनेछ जीवन तपाईं को लागि धेरै सजिलो छ ।
चाँडै र बस कार्यक्रम स्थापना तपाईं आवश्यकता र कुनै समय मा सबै तपाईं आफैलाई पाउनुहुनेछ लेखन निबन्धहरू Windows मा प्रयोग र आफ्नो bootable USB. यो WinToFlash बनाउँछ काम परेशानी मुक्त लागि.
पनि, WinToFlash लाइट मुक्त छ । कुनै तिर्न आवश्यकता मा सबै को लागि घर र शौक प्रयोग!
स्थापना Windows देखिabootable USB कुनै पनि उपकरणमा!
WinToFlash can createabootable USB संग कुनै पनि आधुनिक डेस्कटप र सर्भर परिवार सेटअप. कुनै पनि संस्करण प्रयोग गर्न सकिन्छ - घर देखि अन्तिम, 32 वा 64 बिट.
WinToFlash धेरै शक्तिशाली छ, विन्डोज गर्न जाने निर्माता अनुमति दिन्छ जो तपाईं स्थापना गर्न र चलाउन पूर्णतया कार्यात्मक Windows सञ्चालन प्रणाली मा एक बाह्य bootable USB फ्लैश वा डीभिडी को जगेडा हार्ड ड्राइभ छ । WinToFlash सिर्जना गर्न सक्छ Windows जान bootable USB ड्राइव देखि कुनै पनि Windows संस्करण/संस्करण पनि देखि, आधिकारिक असमर्थित.
कसरी बारे5विभिन्न Windows संस्करण, live लिनक्स, अफलाइन antivirus र पुन Live CD मा एक bootable USB drive? होइन एक समस्या मा सबै! अब तपाईं गर्न सक्छन् सिर्जना Multiboot bootable USB संग असीमित नम्बर को bootable आइटम मा आफ्नो USB ड्राइव । WinToFlash Multiboot समर्थन कुनै पनि Windows देखि Windows Vista Windows 10.
निस्सन्देह, कुनै अधिक कालो console windows र अप्ठ्यारो सफ्टवेयर तपाईं आवश्यकता भने, गैर-मानक bootloader गर्न स्थापित गर्न सकिन्छ. WinToFlash स्थापित गर्न सक्छन् यो स्वतः, बस चयन GRUB4DOS मा बुट लोडर पृष्ठ, भने मानक लोड गर्न असफल संग आफ्नो पीसी.
आईएसओ, जिप, RAR, टैक्सी, फोल्डर, सीडी वा डीभीडी
WinToFlash यस्तो लेखिएको सबै लोकप्रिय कन्टेनर फाइल: चित्रहरु र अभिलेख छ । कुनै आवश्यकता गर्न माउन्ट एक ड्राइव वा बाधेको चीजबीज खोल्नु म्यानुअल तिनीहरूलाई छ । If you are संग प्रयोग Windows Setup and you don ' t want to पैक गर्न यो आईएसओ/जिप हरेक समय तपाईं परीक्षण - बस सेट स्रोत फाइल तपाईँको फोल्डर र प्रेस सुरु भएको छ ।
एमएस-डस मा एक bootable USB
केही motherboards आवश्यकता पुरानो शैली DOS चमकती कार्यक्रम, WinToFlash सिर्जना गर्नेछ तपाईं को लागि bootable USB संग एमएस-डस मा एक क्षण । Copy your चमकती कार्यक्रम आफ्नो bootable USB, रिबुट र उज्यालो आफ्नो BIOS.
या तपाईं बस चाहनुहुन्छ खेल्न केही राम्रो कार्य खेल मा वास्तविक हार्डवेयर?
FAT16, FAT32, NTFS, exFAT संग CHS र LBA सम्बोधन
प्रयोग FAT16 CHS मा उन्नत मोड भने, आफ्नो motherboard गर्न असफल बुट अप USB ड्राइव संग FAT32 Windows XP Setup. तपाईं एक विकल्प लागि राम्रो मिल्दोजुल्दो र समस्या निवारण छ । असल tine को सबै बोसो विकल्प छ आफ्नो सेवा मा पनि! सेट कुनै पनि आकार को विभाजन you need.
केही motherboards won ' t boot सम्म तपाईं प्रयोग CHS सम्बोधन लागि विभाजन र फाइल सिस्टम । त्यसैले, कुनै, समस्या, WinToFlash यो काम गर्न सक्नुहुन्छ!
यो धेरै कडा आज किन्न USB ड्राइव भन्दा कम 4Gb मा एक स्टोर छ । तर तपाईं आवश्यक भएमा 512 एमबी USB ड्राइव बुट गर्न पुरानो DOS? WinToFlash सीमित हुनेछ आफ्नो bootable USB गर्न कुनै पनि आकार तपाईं आवश्यक छ ।
यो विकल्प सक्रिय पार्नुहोस् मा उन्नत मोड सेट, मूल्य र प्रेस चलान!
प्रोफाइल बचत र लोड
Save your bootable USB विकल्प फाइल र लोड तिनीहरूलाई मा कुनै पनि समय तपाईं आवश्यक छ ।
विस्तृत लग फाइल
समस्या? बुझ्न सक्दैन एउटा त्रुटि? हेर्न लग फाइल - जवाफ त्यहाँ छ ।
पूर्ण सूची WinToFlash विशेषताहरु
नेभिगेट गर्नुहोस् विकि पृष्ठ र थप पढ्नुहोस् बारेमा WinToFlash विशेषताहरु